महिलालार्इ मुटु रोगको जोखिम कति ?
ठूलो मुटु हुनु भनेको सामाजिक दृष्टिले उदार हुनु भनेर बुझिन्छ। कसैले निःस्वार्थ सेवा र सहयोग गरेको देख्यौँ भने हामी भन्छौँ, कस्तो ठूलो मुटु भएको मान्छे। तर चिकित्सा विज्ञानले भने ठूलो मुटुलाई राम्रो मान्दैन। बरु मुटु ठूलो हुँदै जानुलाई ‘काडिर्यो मिगेली’ नामको रोगको संकेतका रुपमा लिइन्छ।
डा. ओममूर्ति अनिलका अनुसार महिलाको मुटु पुरुषको भन्दा सानो हुन्छ। औसतमा ६० ग्राम सानो। उनी भन्छन्, ‘मुटु सानो हुँदा मुटुरोगको जोखिम कम हुन्छ। त्यसैले महिलाहरु मुटुरोगको कम जोखिममा हुन्छन्।’
डा. अनिलले हाँस्दै भने, ‘ठूलो मुटु हुनेले धेरै माया, उदारता देखाउँछन् भन्छ समाजले, तर यहाँ त ठिक उल्टो छ। सानो मुटु हुने महिलाहरुले जति माया र उदारता पुरुषले कहाँ देखाउँछन् होला र? कतै जति सानो मुटु उति धेरै माया पो हो कि?’
डा अनिलका अनुसार एस्ट्रोजन नामक हर्मोन महिलाका लागि मुटुको रक्षा कवज नै बनेर बसेको हुन्छ। यसले कोलेस्टेरोल बढ्न दिँदैन। रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्छ र मुटुका रक्तनली साँघुरिन दिँदैन।
महिलालार्इ मुटुरोगको जोखिम
महिलाको ४५ देखि ५० वर्षको उमेरमा एस्ट्रोजन हर्मोनमा गडबडी आउँछ। त्यसपछि भने महिलामा पनि मुटु रोगको सम्भावना बढेर जान्छ। यो उमेरलाई महिलाको मेनोपोज (महिनावारी सुक्ने) को समय मानिन्छ। सामान्य अर्थमा हेर्दा महिनावारी सुक्ने देखिए पनि भित्री रुपमा भने हर्मोनमा गडबडीका कारण विभिन्न परिवर्तन आउँछन्।
हर्मोनमा आएको गडबडीकै कारण मेनोपोजपछि प्राकृतिक सुरक्षा कवच कमजोर हुन्छ। उनका अनुसार त्यसपछि मधुमेह, रक्तचाप, मोटोपना जस्ता समस्याले चाँडो आक्रमण गर्छन्। मुटुरोग पनि स्वभावतः बढ्छ।
उमेरले ४५ अर्थात् मेनोपोजको समयसम्म मुटु रोगका हिसाबले पुरुषभन्दा सुरक्षित महिला त्यसपछि भने बढी जोखिममा हुने डा. अनिल बताउँछन्। भन्छन्, ‘पुरुषले जति नै धूमपान, मध्यपान र मासुजन्य खाना खाए पनि हर्मोनमा आएको गडबडीले महिलालाई बढी असर गर्छ।’
मुटुमा समस्या आएको जनाउ दिने लक्षणहरु पुरुषमा थाहा पाउने गरी देखिन्छ। त्यसैले लक्षणअनुसार उपचार गरेर हृदयाघात हुनुबाट पुरुषलाई जोगाउन सकिने डा. अनिलले बताए। उनले भने, ‘महिलामा देखिने लक्षणले कहिलेकाहीँ बिरामी आफैँ र डाक्टरलाई समेत झुक्याउँछ। किनभने मुटुमै दुखाइ नभई घाँटी दुख्ने, बंगारा दुख्ने, स्वाँ–स्वाँ हुने जस्ता लक्षण मुटुको समस्याका कारण हुन सक्छन्।’ यसरी महिलामा देखिने फरक लक्षणले उपचार अन्यत्र केन्द्रित गर्दा यता मुुटुमा समस्या बल्झिँदै जाने जोखिम रहन्छ।
महिला मुटुरोगको जोखिममा रहने अर्को कारण उनीहरुको आफ्नै स्वभाव र सामाजिक संरचना हो। कतिपय अवस्थामा महिलाले सकेसम्म आफ्ना स्वास्थ्य समस्या लुकाउन खोज्ने गरेको डा. अनिलले भेटेका छन्। उनले भने, ‘अलिअलि बिसन्चो भयो भने कसैलाई नभन्ने। औषधि सकिँदा पनि विभिन्न समस्याका कारण किन्न नखोज्ने गरेको देखिन्छ।’
पुरुषको तुलनामा महिलाले उपचार पनि नपाउने उनको अनुभवले बताउँछ। अस्पताल पुर्‍याइए पनि महिलाहरु महँगो उपचार गर्नु पर्दा हिचकिचाउने गरेको उनले देखेका छन्।
सकेसम्म समस्या मनभित्रै दबाउने भएकाले तनाव र डिप्रेसनको शिकार हुन्छन् महिला। मुटुरोग हुने एउटा महत्वपूर्ण कारणमध्ये पर्छ डिप्रेसन।
जोगिन के गर्ने ?
महिलालाई ४५ वर्षभन्दा कम उमेरमा मुटु रोग हुँदै नहुने भन्न खोजिएको होइन तर पुरुषसँग तुलना गरेर कम भनिएको हो। त्यसैले मुटु जोगाउन अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण सावधानी सुरुदेखि नै अपाउनुपर्छ। डा. अनिलका अनुसार महिनावारी सुकेपछि पुरुषभन्दा बढी महिला सचेत हुनुपर्छ।
उनले भने, ‘महिनावारी सुक्ने बित्तिकै 18 र खानपान परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले पहिलेदेखि नै होसियार रहनुपर्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। शारीरिक व्यायाम बढाउनुपर्छ। मोटोपनलाई सकेसम्म नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्नैपर्छ।’
महिलाले बढ्दो उमेरसँगै आफ्नो मुटु जोगाउन रोग लुकाएर बस्ने बानी त्याग्नै पर्ने सुझाव दिन्छन् डा. अनिल। उनी थप्छन्,‘आफ्नो स्वास्थ्यमा आएका सानातिना समस्या पनि परिवारका सदस्यलाई बताउनुहोस्। शरीमा केही अप्ठ्यारो महसुस भयो र बिरामीका केही लक्षण देखिए पनि जाँच पड्तालका लागि गइहाल्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ।’